Samachar Batika || News from Nepal » तपाइलाई थाहा छ ? यस्ता मानिसहरु कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन् !
तपाइलाई थाहा छ ? यस्ता मानिसहरु कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन् !
पोखरा । धनी बन्ने रहर सबै मानिसको हुन्छ । तर अक्सर मान्छेले गरिबी मै आफ्नो जीवन व्यतित गर्छ । मानिस गरिबी हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छ र कमजोरीहरु हुन्छन् । आज हामी त्यही कारण र कमजोरीहरु उल्लेख गर्न गइरहेका छौँ । यस्ता मानिसहरु जसले जीवनमा कहिल्यै धन कमाउन सक्दैनन् ।
५.ऋण लिने र अस्वस्थ्य व्यक्तिः ऋण लिने मान्छे र अस्वस्थ्य व्यक्ति पनि कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन् । यिनिहरुले जीवनभर दुःख, कष्ट गर्दै आफ्नो जीवन व्यतित गर्छन् ।
७.संकिर्ण सोचाई भएका मानिसहरु : संकिर्ण र सकिर्ण सोचाइ बोकेर हिड्ने व्यक्तिहरु पनि कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन् । साघुँरो सोचाइ बोकेर मै खाऊँ मै लाऊ भन्ने सोचले अगाडि बढ्ने मानिसहरुले कहिल्यै सफलता हात पादैनन् ।
८.लगनशील भएर कर्म नगर्ने मानिस : जीवन धेरै संघर्षशिल छ । जसले मेहनत र संघर्ष गर्छ उसले मात्र सफलता हात पार्न सक्छ । त्यसैले अल्छी मानिसहरु कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन् ।
११.मनोबल कमजोर भएका व्यक्तिहरु : आफ्नो मनोबललाई कमजोर पार्ने मानिसहरुले पनि गरिबी मै जीवन बिताउँछन् ।
प्रकाशित मिति १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:१५